प्रेमिकाले मेरो पेटमा बच्चा छ मेरो अन्तै बिवाह गरिदिन लागे भनेपछि प्रेमिकाको आग्रहमा पुगेका थिए नवराज ! « Bagmati Online
जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । तीन सन्तानको भविष्यको निन्तामा थिइन् । छोरा नवराज मात्र हुन् । उनै जवान छोरालाई चुडेर लगेपछि उनको संसार उजाडिएको हो । समाजमा अग्रणी भूमिका खेल्ने उनका छोराको राम्रै इज्जत थियो । उनले नवराजको प्रेमिका घरमा आउँदा सुरुमा त कोही साथी होला भनेर वास्ता गरेकी थिइनन् । तर पछि प्रेमीका भन्ने थाहा पाएपछि भने उर्मिलाले पनि सम्झाएको बताएकी छन् । समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कारण पछि आफ्नो छोरालाई समस्या होला भन्ने ठानेर किशोरीलाई पनि यो सम्बन्ध अगाडी नबढाउ भनेर सम्झाएको उनी बताउँछिन् । तर घटनाले यस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुरा भने आफुले नसोचेको उनी बताउँछिन् । सानो जातले ठूलो जातलाई मन पराउनु हुँदैन भने कानुन लगाएर जेल हालेको भए पनि हुन्थ्यो । मारिदिए बाबु कसलाई गुहार माग्न जानु ? सरकारले हाम्रो पीडा सुन्दो रहेनछ ।,” उर्मिला निरूपाय हुँदै पीडा पोख्छिन् । आफु त्यो दिन घरमा भएको भए छोरालाई त्यसरी जान नदिने उनको भनाई छ ।
मेरो बाबु आमाले अन्तै बिहे गराइदिन लागेका छन् । पेटमा छ भन्दै थिइन् । यताबाट छोराले मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ । अरु मलाई केही चाहिँदैन भन्दै थियो,ु उनले भनिन् । एउटा मात्र छोरा थियो । प्रहरीमा भर्ती हुन थालेको थियो । हामी गरिब दलित हौं । उनीहरु ठकुरी त्यो केटीसँग सम्बन्ध राख्न छाड भनेकै हौं । तर मानेर अहिले ज्यानै हाली दिए,ु बाबु मुनलालले भने ।
तीन वर्षदेखिको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने लक्ष्यका साथ जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विक र पश्चिमरुकुमको चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी १७ वर्षीया मल्ल थरकी युवतीकहाँ पुगे । नवराज र उहाँका १९ जना साथी बाटोमा हौसिँदै गएको बताउँछन् । तर जब युवा सोती पुगे, माहोल एकाएक बिग्रियो । कथित दलित समुदायका नवराज र ठकुरी समुदायकी ती युवतीको ‘जात’ नमिले पनि उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन चाहन्थे । तर, नवराजका आमाबाबालाई भने अन्तरजातीय विवाह मन परेको थिएन । छोराले ढिपी गरेपछि हुन्छ भन्ने मुडमा आफूहरु पुगेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैले नवराज शनिबार राति आफ्ना साथीहरुलाई लिएर दुलही ल्याउन सोती गएका थिए ।
घाइते युवा सरोज भँडेल भन्छन्, “हामी आधा घण्टासम्म सडकमा दैडिरहेका थियौँ । सडक तेर्साे भएकाले मारिने डर भएपछि नदीमा हा’मफालेका थियौँ । आफूहरुले नदीमा हा’मफाले पनि ढु’ङ्गामु’ढा गर्न छाडिएन । प्रहरी आएपछि हामीलाई पक्राउ गरेपछि बल्ल हामी सुरक्षित भएको महसुस भयो ।” घटनामा दोषी रहेको आरोपमा रुकुम प्रहरीले चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका बुवा वीरबहादुर मल्ललगायत १२ जनालाई पक्राउ गरिएको जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएएपी) किशोर श्रेष्ठले बताउनुभयो । मृतक युवाको शव जाजरकोट अस्पतालमा राखिएको छ । घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजिएको भन्दै आफन्तले शवको परीक्षण गर्न दिएका छैनन् ।
मृतक तीनै जनाको शव भेरी नदी किनारमा भेटिएको थियो । अन्यको खोजीकार्य जारी रहेको छ । घटनामा परेर भेरी नगरपालिकाका सुदीप खड्का, मदन शाही, सरोज भँडेल, आशिष विकलगायत १२ घाइते भएका छन् । खड्का र शाहीको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य सामान्य उपचारपछि घर फर्केका छन् राष्ट्रिय दलित साझा नेटवर्क नेपालको केन्द्रीय कार्यालयले घटना निन्दनीय भएको र गम्भीर छानविन गरि दोषी उपर कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरेको छ । एक्लो सहारा गुमाएर विह्वल बनेकी उर्मिलाको न्याय पाउने आश मरिसकेको छ । गरिबीसंग लडिरहेकी उर्मिलालाई सहनै नसक्ने पुत्रशोक परेको छ । “दलित भनेर सबैले हेलाहाँसो गर्दा रहेछन् । ठूलो जातको चेलबेटीमा आँखा लगाएपछि यस्तै हो भनेर अरूले पनि खासै वास्ता गरेका छैनन्, उनले आफ्नो वेदना पोखिन् ।